Ikhaya leHolide eMontafon enegadi entle
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguBernhard
Ikhaya lethu leholide elisanda kulungiswa likwigadi enkulu yemithi ebukekayo kwindawo ekufutshane yeendlela zokuhamba intaba kunye ne-ski runs. Ngemizuzu nje embalwa ungafikelela kwindawo yokutyibiliza kunye nentaba iGolm kwaye indlela yokuhamba eqala ngasemva kwendlu ikuse kwilizwe elinomtsalane leentaba zeRätikon. Amagumbi aqaqambileyo, indawo eninzi, iindawo zokuhlala ezitofotofo, iibhedi ezitofotofo kunye nomxube ophumeleleyo wezinto ezindala nezintsha zikulindile-indawo efanelekileyo yeholide yosapho lwakho okanye iholide nabahlobo.
Ikhaya leeholide eliphangaleleyo liqhayisa ngaphezulu kwe-140 m² yendawo yokuhlala kwimigangatho emibini. Inika amagumbi okulala amathathu kunye negumbi elinye labantu ababini (ibhedi enye), zonke zinebalcony, izindlu zangasese ezimbini, ikhitshi, igumbi lokuhlambela elinendawo yokuhlambela kabini kunye neshawa enkulu, igumbi lokuhlambela lesibini elineshawa kunye nesauna yaseFinland, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala le4. kubantu abasi-8 umntu ngamnye. Kwigaraji kukho igumbi le-ski elishushu kunye ne-boot dryer, ekwabelwana ngayo kunye nendlu yesibini. Indawo yegaraji etshixwayo, i-terrace egqunyiweyo kunye neendawo ezininzi zangaphandle ziyafumaneka.
Ikhaya leeholide eliphangaleleyo liqhayisa ngaphezulu kwe-140 m² yendawo yokuhlala kwimigangatho emibini. Inika amagumbi okulala amathathu kunye negumbi labantu ababini (iibhedi zomntu omnye), zonke zinebalcony, izindlu zangasese ezimbini, ikhitshi, igumbi lokuhlambela elineshawa enkulu, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala labantu aba-4 ukuya kwabasi-8. Igumbi lokutyibiliza elishushu elinesomisi sebhuthi, indawo yegaraji kunye nethala eligqunyiweyo liyafumaneka.
"I-Gentiana" ifanelekile kwintsapho enye okanye ezimbini kunye nabantwana okanye iqela labahlobo abafuna ukuhamba kunye, kodwa kwangaxeshanye banqwenela ubumfihlo. Eli khaya leeholide libonakaliswa ngobubanzi kunye nezinto zangaphakathi eziyinkimbinkimbi. Ubuchwephesha bemveli obuphezulu kunye nentuthuzelo yanamhlanje iyancedisana.
Ikhitshi enkulu yosapho ene-oveni, isitya sokuhlamba izitya, isitovu se-ceramic esineepleyiti ezine, umatshini wekofu weCafissimo, ifriji eyahlukileyo kunye nefriji, iketile yombane, itoaster, iraclette.
Igumbi lokuhlambela elineshawa enkulu kunye nezitya zokuhlambela ezimbini, isixhobo sokomisa iinwele, iitawuli ezaneleyo,
Igumbi lokuhlala kunye nelayibrari kunye ne-cable TV (43" Flat UHD 4K Smart LED TV), i-WLAN esekelwe kwi-BOSE Soundtouch inkqubo yomculo.
Ibhedi eyongezelelweyo, ibhedi yokuhamba kunye nesitulo esiphezulu sabantwana esikhoyo
Igumbi lokuhlala elinethala leencwadi kunye nomabonakude wentambo (43" Flat UHD 4K Smart LED TV)
Igumbi lokutyela elahlukileyo elinetafile enkulu kunye nokufikelela kwi-terrace
Ikhitshi (i-oveni yokubhaka, umatshini wokuhlamba izitya, isitovu seceramic esineepleyiti ezine, umatshini wekofu weCafissimo, isikhenkcisi esahlukileyo kunye nesikhenkcisi)
Igumbi lokulala "Zimba" kumgangatho ophantsi
ICorridor kumgangatho ongaphezulu
I-terrace egqunyiweyo kunye negumbi lokutyibilika kumgangatho ophantsi
Igumbi lokulala "Drusenfluh" kumgangatho ophezulu
Igumbi lompayina wamatye kumgangatho ophezulu
Igumbi labantwana kumgangatho ongaphezulu
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, iibhedi ezikhweleneyo eziyi-2
Umbuki zindwendwe ngu- Bernhard
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vandans